Kuyingozi kangakanani inkukhukazi lapho ukhulelwe?
Ikhaya nomndeni, Ukukhulelwa
Ngesikhathi sokukhulelwa, owesifazane uzama ukwenza konke okusemandleni ukuzivikela yena kanye nengane yakhe yesikhathi esizayo. Impilo kamama ixhomeke enhlalakahleni ye-fetus nokuthuthukiswa kwayo okuqhubekayo. Yiqiniso, lesi akusona isizathu sokuvala ekhaya futhi ungayi kuphi, ungaxhumani nabangani, ukuze ungalimazi. Ngalesi sikhathi kufanele uqaphele kakhulu, isibonelo, gwema ukuthintana nabantu abanesandulela ngculaza.
Esinye sezifo ezithathelwanayo eziyingozi yi-inkukhu. Kunemithombo eminingi yokutheleleka, ikakhulukazi ngokuvamile omama abalindelekile banesandulela ngculazi okhulelwe onenkukhu yezingane zabo ezindala, ngoba yingane engakwazi ukubhekana nalesi sifo. Kunengozi enkulu yokubamba inkukhu uma owesifazane esebenza nezingane, isibonelo enkulisa noma esikoleni. Kuyakhuthaza ukuthi kukhona amacala ambalwa okutheleleka: 1-2 abesifazane besifazane ababili abakhulelwe. Abanye besifazane balindele ukuthi babulale ebuntwaneni, futhi lesi sifo ngeke siphinde senzeke. Ngempela, ngaphambili kwaba yilokho, kodwa manje kwakukhona ukuguqulwa kwegciwane, ngenxa yalokho umzimba ongeke ukwazi ukumelana nakho konke ukuphila kwawo kanye nenkukhu ngesikhathi sokukhulelwa kungaziphindaphinda.
Inkinga yesifo ngesikhathi sokubeletha ingane ifana nendlela yayo evamile yokuvuza. Kodwa igciwane lingakwazi ukushaya ingane, futhi imiphumela iyoba yinto engathandeki kakhulu. Kuncike esikhathini sokukhulelwa, kunezinga elihlukile lokubeka umonakalo wokulimala komntwana. Okubaluleke kakhulu ukuqala kwesikhathi sokubeletha, ngoba emasontweni ambalwa okuqala zonke izitho zengane ezayo zakhiwa, futhi emavikini okugcina owesifazane ulungiselela ukuzalwa okuzayo. Ngokuvamile, izidakamizwa ezinamandla azikwazi ukusiza kodwa zithinte lezi zinqubo. Ngokuvamile, inkukhu ngesikhathi sokukhulelwa esemncane iholela ekukhulelwe okuqhubekayo noma ukuphazanyiswa okuzenzekelayo, okungukuthi, ukukhulelwa kwesisu. Esikhathini sesibili sesibili, lesi sifo singabhekana nezinkinga ezikhethekile ekuthuthukiseni i-fetus.
Uma, emva kwakho konke, inkukhu yokukhulelwa ngesikhathi ukhulelwe inqobile owesifazane, okokuqala, awukwazi ukungena ekwesabeni nokwesaba. Khumbula ukuthi lesi sifo ngokwawo singadlula ngaphandle komkhondo wengane yesikhathi esizayo, kodwa izinzwa zakho ngokuqinisekile zizoshiya uphawu esimweni sakhe sempilo. Kuyadingeka ngokushesha ukuxhumana nodokotela ozofika, ozobe echaza ngokuthula ukuthi lesi sifo singathinta kanjani ingane. Futhi, kufanelekile ukuba silungele iqiniso lokuthi manje uhambo oluya kudokotela luzobamba iqhaza, inani lokuhlolwa lizokhula.
Ngokuvamile, ukuphatha inkukhu futhi ukuvimbela imiphumela emibi ekuthuthukiseni ingane, owesifazane uthola isilinganiso se-immunoglobulin, futhi uqoka i-acyclovir. Izimo ezingathí sina lapho izinkukhu zithinta khona ama-oragnism ngaphambi kokubeletha. I-Dangerous yileli gama izinsuku ezimbili ngaphambi kokuqala kwenqubo yokuzalwa futhi kungakapheli izinsuku ezinhlanu. Igciwane lingawunqobe kuphela izitho zowesifazane, kodwa futhi likwazi ukunqoba umntwana. Ngaphezu kwalokho, kungenzeka ukuthi umntwana uzobeletha ngenkukhu, okuzokwenza kube nzima izinsuku zokuqala zokuphila kwakhe.
Odokotela, uma kunokwenzeka, zama ukubambezela ukuzalwa kwe-pod, i-akhawunti isivele isensukwini. Ngisho nezinsuku ezimbalwa zokubambezeleka zingasiza ekuvimbeleni imiphumela emibi. Uma ngabe ingane isuvele ingenwe, khona-ke ijoba ingxenye ye-immunoglobulin futhi iyenze ukwelashwa, okuzokwenza buthakathaka umkhuhlane wakhe. Kodwa emva kokwelashwa, awukwazi ukukhathazeka ngokuthi uzoyithola inkukhu, ngoba izifo ezithinta igciwane sezivele zakhiwe emzimbeni wakhe.
I-chickenpox ngesikhathi sokukhulelwa akusona isifo esibi esingenakunqoba. Ngakho konke ongakubhekana nakho, into esemqoka - ungalibali futhi ngesikhathi sokubona udokotela. Lokhu kuzosiza owesifazane ukuthi athole ukwelashwa okusheshayo futhi avikele ingane. Futhi-ke, kuyadingeka ukulandela izinyathelo zokuvimbela. Isibonelo, uma ukukhulelwa kuhlelwe, okungukuthi, umbhangqwana ulungiselela lesi sigaba empilweni eside, bese ugwema ukuthintana nomama okhulelwe onenkukhu.
Lokhu "ukuthuthukiswa kwe-intrauterine"
I-IVF: ukubuyekezwa. I-IVF ngeqanda lomnikelo: imiphumela yalokho ingane ibukeka
Kuyini ukuzivocavoca kwabesifazane abakhulelwe?
Yini okufanele ibe nesisindo sokukhulelwa ekukhulelwe?
Kungani kuncibilika emnyama ngesikhathi sokukhulelwa? Izizathu zokukhathazeka
Ama-Creams amamaki eselulele kubantu besifazane abakhulelwe: ukubuyekezwa. Amakhemikhali aphezulu kusuka kumamaki elula: amanani, izincomo
Inhloko-dolobha ye-Sicily. Izikhangibavakashi Photo
Yezimo ngolimi Russian: izinhlobo kanye nenani
Zonke oludingekayo ukuze landscape izithombe
Wonke umuntu ufuna ukwazi kilojoule amaningi indlela usuku
Yini impilo yenjini? Yini impilo inkonzo injini diesel?
Alexander Galibin: Filmography, biography kanye nempilo yakho
Famous umlingisi Russian Dmitry Frid
Indlela sikhule ngokushesha izinwele ekhaya: amathiphu namasu
Ukubukezwa okufushane kwe-smartphone ethi "Nokia 1320"
Imincintiswano kangcono amantombazane